Isku-shaandheynta wasiirada oo ay ku jirto kordhinta tirada wasiirada "Xog" - Caasimada Online
Home Warar Isku-shaandheynta wasiirada oo ay ku jirto kordhinta tirada wasiirada “Xog”
Isku-shaandheynta wasiirada oo ay ku jirto kordhinta tirada wasiirada “Xog”
Hargeysa (Caasimada Online) Iyadoo dhawaan soo baxeen warar sheegaya in golaha wasiirrada Soomaaliya lagu sameyn doono isku shaandheyn, ayaa la sheegay wasaaraddaha ay saameyn doonto isku shaandheynta ay ku jirto wasaaradda arrimaha dibedda iyo is-kaashiga caalamiga.
Waxaa qorshe uu yahay in wasaaradda iskaa-shiga caalamiga ah laga dhigo mid iskeed u taagan, sidaasna darteedna loo magacaabi doono wasiir cusub, taasi oo sii kodhineysa tirada wasiirada.
Suldaan Ceyduur Suldaan Saalax Suldaan Ibraahim, oo ka mid ah salaadiinta ka soo jeeda Somaliland, ayaa madaxda dowladda ka codsaday in ay joojiyaan in ay kala qaadaan wasaaradda arrimaha dibedda.
Suldaalka oo caawa la hadlaayay Idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in uu maqlay dowladda wasaaradaha ay kala qaadeyso in ay ku jirr wasaarrada arrimaha dibedda.
Wuxuu sheegay in madaxweynaha ay aad u xiriiraan dhowr jeerna uu taallo siiyay, balse wuxuu yiri lama rabo in waxa ay noqoto beelo la qanciyo waa dowlad meeshu”ayuu yiri Suldaanka.
Mar la weydiiyay waxa ay ku diiddan yihiin in la kala qaado wasaaradda arrimaha dibedda, wuxuu tilmaamay in waligeed wasaaradda arrimaha dibedda iyo is-kaashiga caalamiga ay ahayd hal wasaarad.
Hadalka Suldaanka ayaa ku soo beegmay iyadoo maalmahan suuqa la isla dhex maraayay in ra’iisal wasaaraha xukuumada Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed uu damacsan yahay in uu isku shaandheyn ku sameeyo xubnaha wasiiradiisa maadama ay soo baxeyn beelo dhaliilsan dowladda.